SD kaadị mgbake omume bụ oké ụzọ jide n'aka na needful a mere n'ime oge na na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na mmekọrita SD kaadị mgbake omume bụ nanị kwe omume ma ọ bụrụ na ndị dị iche iche ihe na-tụnyere na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma amụọ mgbe ọ tụlesịrị atụmatụ ndị a otu otu. Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime SD kaadị mgbake software omume na a pụrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mmekọrita data mgbake.
Obi abụọ adịghị otu nke kasị mma na mmemme iji jide n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge na nke kacha mma na-nyere ka onye ọrụ na enyemaka nke ala nke nkà technology nke e ji mee na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ntuziaka nke usoro ihe omume a na-agụ n'elu Wondershare ukara website nke mere na onye ọrụ nwere ike nweta ihe kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ na-enweghị ihe ọ bụla nke na-egbu oge.
• Ihe omume ahụ bụ ma maka novice ọrụ na ndị ọkachamara
• N'ihi nkezi ọrụ ọkachamara mode e agbakwunyere
• Ihe omume gaara ọzọ kenkwukorita mgbe ọ na-abịa interface.
• The ala nke iji eme ka ọ erughị ala maka tech savvy ọrụ mgbe ụfọdụ.
2. Soft zuru okè faịlụ mgbake
Ịbụ ìhè na arọ na mfe atụmatụ na e agbakwunyere onye ọrụ na-ahụ na ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na-eji nke a na mkpokọta mmewere nke rụrụ ọrụ ẹnịm. Ojiji nke usoro ihe omume dị pụtara dị mfe na nke pụrụ ịkpata data mgbake nwekwara adịghị ihe nke mgbe nile. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume a na-eji dị ka kwa ntuziaka na-abịa, tinyere.
• Ihe omume ahụ bụ nnọọ obere na-aba na-erepịakwa fọrọ nke nta nweghị ohere
• Ọ bụ nnọọ mfe iji na ịnọgide na-enwe na-enweghị nsogbu ọ bụla
• The recoverable faịlụ na-mgbe previewed site a usoro
• The ehichapụ faịlụ na-mgbe e gosiri na okwu nke ike.
3. Udo Anyị data mgbake
Kpọmkwem na akara na aha atụmatụ nke usoro ihe omume na-ahụ na ndị kasị mma na ala nke nkà imewe na nyere ka onye ọrụ nke mere na ha nwere ike inwe ihe kasị mma amụọ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Mmepe nke usoro ihe omume e mere mfe ma maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ enweghị ihe ọ bụla na kọmputa nkà nwere ike iji ya na-enweghị nke na nsogbu. Iji nweta kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ na Ị kpọghee ekwt ezi nwere onye ọrụ kwesịrị ịgụ ntuziaka nke usoro na ọnọdụ tupu echichi amalite.
• The ntọala na metụtara meziri na gbapụta mgbe echichi bụ dị nnọọ mfe nghọta.
• The faịlụ nwere ike mfe previewed tupu ha na-natara-eme ka ọ dị mfe maka onye ọrụ.
• The data na ike ga-natara bụ 2 ma ọ bụ n'okpuru 2GB na ngụkọta.
• The obere version bụ n'ebe dị ka diski ike echichi a chọrọ.
4. Amamihe data mgbake
Dị ka aha na-egosi ihe omume bụ maa maara ihe na-eme n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu usoro na-eji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a. Ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịrị iji software n'okpuru otu ọkachamara na-elekọta Ọ bụrụ na kọmputa nkà nkezi dị ka ọ ga-eme ka n'aka na niile atụmatụ nke usoro ihe omume na-anya enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Onye ọrụ nwere ike na-na-kasị mma atụmatụ ma ọ bụrụ na omume na-eji na akara na ihe ndị a chọrọ ndị na-n'ihu.
• Ihe omume ahụ bụ nnọọ mfe iji na mkpokọta Mbido bụkwa mfe iji wụnye.
• Nke a omume nwere ike naghachi multiple faịlụ n'otu oge.
• The faịlụ na-enịm ha mbụ na ọnọdụ.
• The onye ọrụ nwere ike na-agba ọsọ usoro ihe omume na OS ọzọ karịa windows.
Usoro ihe omume e mepụtara site Telus Inc onye mara maka kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na nke a. The interface bụ nnọọ mmekọrịta na ala nke iji bụ otu n'ime isi ihe ndị na-eduga onye ọrụ kwupụta a dị oke egwu tech ibe. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na okwu nke data mgbake ọ na-gwara iji jide n'aka na ihe omume na-abụghị nanị arụnyere ma ga-nọ na usoro ka e needful mere na-enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
• The disk ohere na ihe omume ahụ na-erepịakwa bụ ihe na-erughị 500KB
• The multiple faịlụ mgbake nhọrọ bụ n'ebe na-akwado ọrụ.
• The recoverable faịlụ a mgbe e gosiri site a usoro.
• The Win 8 OS akwadoghi a usoro ọ na-enye njehie.
Puran File mgbake
Usoro nke na-agbake data site na kaadị ebe nchekwa site na Wondershare Data Recovery
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ndị kasị elu Filiks na-eme ka n'aka na Wondershare Data Recovery na-eji na kasị mma n'ụzọ na na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro a ga-kwuru ebe a na-soro dị ka kwa ntuziaka nke mere na ọ bụghị nanị na needful na-eme na ihe kasị mma n'ụzọ ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma amụọ enweghị ihe ọ bụla nke na- nsogbu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị iji otu URL maka software download iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka usoro dị ka exe faịlụ na ukara website na-abụghị nanị emelitere ma ọ na-eduga ná ezi software. Usoro a ga-soro iji jide n'aka na faịlụ a natara e kọwara dị ka n'okpuru:
1. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ezi omume na-ibudatara na URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html mere na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma usoro mmalite na bụ omume:
2. Onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na faịlụ ụdị na a ga-eweghachi na-ahọrọ nke mere na usoro ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọsọ site achọta naanị na ụdị:
3. Onye ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ọnọdụ nke furu efu faịlụ a na-kpọmkwem iji jide n'aka na tht naanị na òkè nke usoro a na-achọgharị:
4. The natara faịlụ ndị mgbe ahụ ka a ga-elele na ndị na ndị a ga-eweghachi na-ticked ka e needful mere:
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Top 5 SD kaadị mgbake software